Caalamka Online » DEG DEG: Farmaajo oo si deg deg ah Garoowe uga baxaya saacadaha soo socda ka dib markii….
DEG DEG: Farmaajo oo si deg deg ah Garoowe uga baxaya saacadaha soo socda ka dib markii….
DEG DEG: Madaxweynaha Jamhuuriyaada Fedaraalka ah ee Soomaaaliya Maadaxamedd Cabdulahi Farmaajo aya Maanta si deg deg ah Magaaalada Garoowe uga baxaya saacadaha soo socda ka dib markii halkaas uu ka qarxay dagaal loo maalaynaayo in uu yahay mid ku qotoma Qaab qabiil.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmajo) oo shalay soo gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Maaamulka Puntland iyo Hogaamiyaha Puntland ayaa maanta lagu wadaa inuu xariga ka jaro Garoonka Diyaaradaha magaalada Garowe, oo si casri ah loo dhisay.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa adaha hore ee maanta xalain doona beelaha walaalaha ah e ku dagaaalamaya Duleedka Garowe.